China B UFO Light factory ary mpanamboatra | Liper
Ny hazavana avo bay dia be mpampiasa amin'ny kianja, fivarotana, trano fitehirizana ary toerana indostrialy. Ireo toerana rehetra ireo dia manana endrika iraisana: avo dia avo ny valindrihana, tsy mora apetraka na soloina. Raha te-hametraka na hisolo ny jiro indostrialy ianao dia tonga ny fanontaniana iray tena lehibe: Ahoana ny fisafidianana ny Light Light bay mazava?
Faharetana, fahombiazan'ny angovo, famolavolana tsara, famirapiratana, fandaniana ireo anton-javatra rehetra hodinihinao ireo.
Lipper IP65 UFOs dia afaka manolotra vahaolana vahaolana amin'ny jiro indostrialy tsara hahafeno ireo fepetra takiana rehetra ireo.
Famolavolana patanty—Ny endrika UFO miaraka amina fin fin ho an'ny endriny iray, tsotra sy kanto, dia tena miavaka eny an-tsena. Maody manokana aho, tsy afaka mahita mitovy tanteraka eny an-tsena ianao.
Faharetana—Ny famoahana ny heat heat aluminium miaraka amina vombony mangatsiaka dia miantoka ny fanaparitahana ny hafanana tsara. Rehefa manao fitsapana fahanterana avo lenta dia manao fikarohana mari-pana amin'ny ampahany manan-danja amin'ny jiro koa isika, toy ny puce led, inductance, mosfet, body ny jiro. Ny jiro UFO Lipper dia miaraka amina tsara fanoherana ny harafesina izay afaka mihoatra ny 24 ora fitsapana masira. Ny mari-pana maivana sy ny hoso-doko manohitra ny harafesina dia miantoka ny androm-piainana lava (30000 Hrs.).
Fahombiazan'ny angovo sy famirapiratana—100W sy 200W modely roa no misy. Ireo jiro ireo dia miasa amin'ny fahombiazan'ny herinaratra 100lm / w raha ny angona fitsapana avy amin'ny efitranonay maizina. Raha ampitahaina amin'ny jiro nentim-paharazana taloha dia afaka mamonjy angovo hatramin'ny 70%.
Fiarovana IP—Ny jiro tarihintsika UFO dia afaka mahatratra ny IP65 notsapaina tamin'ny alàlan'ny milina fanandramana tsy tantera-drano ao anaty fanjakana mafana mandritra ny 24 ora.
Vokany maivana—Avo CRI sy R9> 0 (notsapaina tamin'ny sehatry ny sehatra fampidirana) dia afaka manamboatra loko kokoa ny lohahevitra ary mampiseho ny tena loko. Amin'ity endri-javatra ity, ny Lipper UFOs dia afaka mampiasa ao amin'ny supermarket, trano fisakafoanana hanampy hanehoana ny entana ho manintona kokoa.
Ary tsy izany ihany! Lipper UFO dia CE sy Rosh-voamarina ary misy fiantohana 3 taona. Mora ny mitantana, mametraka ary mitazona. Manolotra rakitra IES ihany koa izahay ho an'ireo mpanjifa manao tetikasa mba hahafahanao manahaka ny tontolo iainana tena jiro amin'ilay tetikasa.
Teo aloha: E Fahazavana Backlit Panel
Manaraka: Angola azo ovaina E Track Light
Saron'ny hazavana avo Bay
Fiambenana hazavana avo Bay
Ufo nitondra hazavana avo Bay
Ufo Led Jiro 100w
D Fahazavana Vaovao